Afhayeenka AMISOM oo dafiray tirada khasaaraha nafeed, isagoo daaha ka rogay qorshayaasha muddada dheer - Sabahionline.com
Waxaa qoray Cabdi Macalim oo Muqdisho jooga
Shir saxaafadeed uu qabtay Maajo 9-keedii, ayuu Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Jan Eliasson ugu sheegay warfidiyeenka in in kabadan 3,000 oo askari oo ka tirsan Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya la dilay tan iyo markii ay bilaabeen in ay la dagaallamaan al-Shabaab 2007-dii.
Afhayeenka Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) Gaashaanle Sare Cali Aden Xumad ayaa sheegay in AMISOM ay taageeri doonto jihaynta xukuumadda Soomaaliya. [Keyd]
AMISOM oo al-Shabaab ka qabsatay caasimad goboleedka Xudur
Hase yeeshee, maalintii xigtay ayay Qaramada Midoobay ka noqotay tiradii.
"Tirada khasaaraha nafeed ee uu adeegsaday Kuxigeenka Xoghayaha Guud waxa ay ka timid qiyaas lagu saleeyay ilo aan toos aheyn; sheegidda tirakoobka saxda ah waxaa kaliya oo mas'uul ka ah Midowga Afrika iyo dalalka ciidamada kaga qeyb qaadanaya," ayay Qaramada Midoobay mareegtooda ku faafiyeen.
Kenya, Uganda, Jabuuti, Burundi iyo Sierra Leone ayaa hadda ciidamo kaga qeyb qaata AMISOM.
"Xoog saaridda kuxigeenka Xoghayaha Guud waxa ay aheyd kaliya in la qeexo boogaadintiisa iyo tan guud ahaan nidaamka Qaramada Midoobay ee ku aaddan shaqada wacan ee ay AMISOM qabatay intii lagu jiray sanadihii lasoo dhaafay," ayaa war murtiyeedka lagu sheegay.
Si gacan looga gaysto in jaha wareerka meesha laga saaro, Sabahi ayaa la hadashay Afhayeenka AMISOM Gaashaanle Sare Cali Aden Humad oo dalka Jabuuti ka socda.
Wareysigan gaarka ah, ayuu Xumad Sabahi u sheegay in wax ka yar 500 ay AMISOM kaga geeriyootay Soomaaliya, iyadoo ay jirto shaqada halista ah ee Soomaalida lagaga difaacayo weerarrada al-Shabaab, laguna taageerayo Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya.
Xumad ayaa sidoo kale ka hadlay qorshayaasha muddada dheer ee AMISOM, taageerada xukuumada Soomaaliya iyo tababarka ciidamada Soomaaliya si ay ula wareegaan ammaanka qaranka.
Sabahi: Sidee AMISOM ula tacaashaa khasaaraha nafeed ee ka soo gaara dagaalka ay Soomaaliya kagala jiraan al-Shabaab?
Colonel Cali Aden Xumad: AMISOM waxay Soomaaliya u timid in ay caawiso dadka Soomaaliyeed, waxaana ka go'an inay u dul qaadato maareynta dhibaatooyinka soo gaara.
Inkastoo aanay wanaagsaneyn in la is xasuusiyo tirada dhimashada, waxaa inaga muhiim noo ah in khasaaraha iyo dhimashada AMISOM soo gaaray ay wax u tareen meelna gaarsiiyeen nabadda Soomaaliya. Taas ayaa muhiim ah.
Sabahi: Balse imisa askari oo AMISOM ka tirsan ayaa geeriyootay, haddii 3,000 aanay sax aheyn?
Xumad: Jawaabta ah meeqa ayaa AMISOM ka geeriyootay waxaa iska leh dalalka ay ciidamada ka socdaan. Dal walba si gaar ah ayuu u sheegi karaa wixii ka dhintay, AMISOM arrintaa kama hadlayso.
Waxaan dhihi karaa, in tirada ay 3,000 ka yartahay, oo kama badna 500. Xitaa haddii 500 la dhaho, aad bay u badantahay.
[Si loo cabbiro guusha howlgalka] AMISOM waxa ay xoogga saartaa waxa lagu tallaabsaday iyo tirada horumarka la gaaray.
Sabahi: Xilligan hoggaanka militariga Uganda ayaa hoggaamiya ciidamada AMISOM. Sidee hoggaaminta AMISOM loo go'aansadaa?
Xumad: Hoggaamintu waa wareegto, haseyeeshee dalka ay ciidamada ugu badan ka joogaan ayaa inta badan lagu tix galiyaa.
Sabahi: Itoobiya maxaa u diiday in ay AMISOM ku biirto?
Xumad: Wax qarsoon ma ahan in Itoobiya ay xuduudda ka soo gudubtay ayna ka qeyb qaadanayso nabadda Soomaaliya. Si walba oo ay ahaataba, sababta aysan ugu biirin AMISOM waxaa kaliya oo ka jawaabi kara xukuumadaha Soomaaliya iyo Itoobiya.
Sabahi: Ma waxaa jira xiriir ka dhaxeeya AMISOM iyo Itoobiya si marka ay Ciidamada Itoobiya aag ka baxaan aanay u dhicin marnaan ammaan?
Xumad: Waxaa jira iskaashi guud oo ku aaddan ka mid ahaanshaheena Midowga Afrika. Sidaasoo ay tahay, go'aanada [ku aaddan sida loo maareynayo howlgallada] waxaa iska leh xukuumadda federaalka ee Soomaaliya.
Sabahi: Soomaaliya dhowaan waxa ay la wareegtay Qorshaha Ammaanka Qaran iyo Xasilinta, kaas oo uu diyaariyay Urur Goboleedka IGAD. Sidee u aragtaa go'aankaas?
Xumad: AMISOM waxaa looga baahanyahay in ay aqbasho amarrada xukuumadda Soomaaliya maxaa yeelay waa dal xor ah oo madax bannaan. Waan sii wadi doonnaa in aan taageerno ammaanka dalka illaa iyo inta ay dowladdu hagaagayso oo ciidamadeeduna ay la wareegi karaan ammaanka.
Sabahi: Waa maxay qorshaha AMISOM iyo xukuumadda Soomaaliya ee ku aaddan dhulka laga xoreeyay al-Shabaab?
Xumad: AMISOM marnaba dhul kaligeed ma xoreyso iyadoo aanay la socon ciidan Soomaaliyeed oo ay dowladdu ogtahay. Marka ay meel guul ka gaaraan, AMISOM farsamo iyo talaba xukuumadda Soomaaliya ayay u dhiibtaa oo ay kaga dambaysaa.
Markii hore waxaan la shaqeyn jirnay Dawladda Federaalka Ku-meel Gaarka ah ee Soomaaliya, balse [xiriirka] hadda waa ka sii muhiimsanyahay maxaa yeelay AMISOM waxa ay la shaqaynaysaa dowlad madax bannaan oo awood u leh in ay amarro soo saarto.
Sabahi: Qaar kamid ah siyaasiyiinta Soomaalida ayaa ku eedeeyay ciidamada Kenya ee AMISOM ka tirsan ee Kismaayo jooga in ay faragalin siyaasadeed ku hayaan dhisidda dowlad goboleedka Jubbaland. Taasi miyaanay wiiqeyn dhex-dhexaadnimada AMISOM?
Xumad: Kismayo Soomaaliya ayay ka tirsantahay, Soomaaliyana dowladda federaalka ah ayaa hadda lagu ogyahay. Xukuumaddu lug bay ku leedahay maamul u samaynta gobollada, AMISOM-na waxay taageeraysaa waxa ay xukuumaddu rabto.
Sabahi: AMISOM meeqa askari ayay u tababartay Soomaaliya illaa hadda?
Xumad: Kumanaan ayay gaarayaan, balse tiro go'an kuuma sheegayo. Waxa ay isugu jiraan militari iyo booliis. Qaar dalka ayay joogaan qaarna dibadda.
Sabahi: Wax horumar ah ma ku gaareen tababarka AMISOM ay ka heleen?
Xumad: Tababarka AMISOM ee ciidamada Soomaaliya -- militari iyo bilaysba -- waa uu guulaystay. Faa'iidadiisa waxaad ka arki kartaa ciidamada Soomaaliya oo ka qeyb qaadanaya howlaha ammaanka, iyagoo muujinaya tababarrada ay heleen.
Sabahi: Tababarka aad siisaan ma yahay mid u diyaarinaya la wareegidda ammaanka qaranka?
Xumad: [Haa], mid ka mid ah waajibaadka ugu horreeya uguna muhiimsan ee AMISOM ay hadda qabato waa in ay tababarto ciidamada Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan. Beesha caalamka waa in ay markaa gacan ka gaysataan qalabeyntooda si ay mar kale u helaan [awoodda lagu xaqiijinayo] xaaladda nabadgalyo ee Soomaaliya iyo jagadeeda [caalamka].
Sabahi: Sidee ayay AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya u wadaagaan mas'uuliyadda marka ay si wadajir ah u howlgalayaan?
Humad: Howlgal walba waxa uu leeyahay talis gaar ah. Mararka qaar waxaa jira wax si lama filaan ah ku dhaca, sida weerar ama ciidamo dagaal gala. Markaasna, ciidamada waxay ku khasban yihiin in ay tallaabo qaadaan.
Inkastoo AMISOM ay ka koobantahay dalal badan oo howlo cayiman qabta, balse howlgal walba waxaa la fuliyaa iyadoo ay ogyihiin mas'uuliyiinta Soomaaliya. AMISOM tallaabo ma qaaddo ogaansho la'aantooda.
Sabahi: Muxuu yoolka AMISOM noqonayaa marka Soomaaliya al-Shabaab laga xoreeyo?
Xumad: Howsha AMISOM waxa ay leedahay [yool] cad. Marka xukuumadda Soomaaliya [ay si buuxda u howlgasho] oo ay ka maaranto AMISOM, AMISOM waa in ay dalka ka tagtaa.
Sabahi: Waa maxay qorshaha aad leedihiin inta sannadkan ka harsan?
Humad: AMISOM iyo xukuumadda [Soomaaliya] wali dalka oo dhan gacanta kuma wada dhigin, sidaa daraadeed [labadeenaba] waa ay noo caddahay halka aan u socono. Si walba oo ay ahaataba, guulaheena hore u socoshada waxa ay ku xiran yihiin taageerada aan ka helno Shacabka Soomaaliyeed.